Socdaalkii Hogaanka UCID ee Yurub iyo W. Ameerika: Horaantii 2008 | Somaliland.Org
Socdaalkii Hogaanka UCID ee Yurub iyo W. Ameerika: Horaantii 2008
March 31, 2008	Socdaalkii wadamada Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ee sanadkan 2008 wuxuu la mid ahaa kuwii ay horay ugu tegi jireen wadamadaas iyo adduunka intiisa kaleba tan iyo intii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka la asaasay 2002 iyo intii ka horeysay illaa iyo markii ay shacbiga Somaliland go’aansadeen iney gobannimadoodii qaaliga aheyd dib ula soo noqday May 1991. Halkan waxa aan ku soo koobaynaa warbixin kooban oo ku saabsan safarradaas dhaadheer ee madaxda xisbigu kusoo wareegeen labada qaaradood ee Yurub iyo Amerika. Nuxrurka iyo ujeeddoyinka waaweyn ay xambaarsanaayeen socdaaladaas waxay ahaayeen:
1- sidii qaddiyadda Somaliland iyo xaaladda ay ku sugantahay bulshada caalamka loola socodsiin lahaa isla markaana looga codsanlahaa adduunka aqoonsi iyo gargaar dhaqaale.
2- Sidii jaaliyadaha Somaliland ee ku dhaqan adduunweynaha loogu baraarujin lahaa waajibaadka ka saaran dibu-dhiska Somaliland iyo dhiirrigelinta midnimadooda.
3- Fidinta ujeeddada loo sameeyey xisbiga cadaaladda iyo mabaadi’diisa salka ku haysa isbedel run ah iyo Somaliland cusub oo casriya.
4- Xoojinta laamaha xisbiga UCID ee dibadaha iyo fidintooda.
Muddooyinkaa madaxda UCID ay wadeen hawlaha qaran waxay ku guuleysteen iney yeeshaan saxiibyo badan oo siyaasiyiin iyo madax dalalka Yurub ah siiba dalalka layidhaahdo Woqooyiga Yurub. Waxaa kaloo kusoo darsamay dalalka ay madaxda xisbiga cilaaqaadka yeesheen dalka Maraykanka iyo Kanada.
Haddaan usoo noqono socdaalka madaxda UCID sameeyeen sanadkan 2008da wuxuu lahaa xiiso gaara. Wuxuu ahaa safarkii u horeeyey ee madaxda UCID oo uu ka tirsan yahay hogaanka qaran ee guud ee somaliland ay la kulmaan madaxda dalalka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Waa ta labaade waa markii u horeysay ee isbeddel siyaasadeed oo ku saabsan qadiyadda somaliland ay madaxda waddamadaasi noo muujiyeen iyagoo dhammantood noo sheegay in ictiraafka somaliland aanu aheyn ma imanayaa, ee uu yahay hadma.
Hawsha qaran ee UCID ee 2008 wuxuu leeyahay xiisa gooni ah tiiyoo dalka ku soo fool leyihiin doorashooyinkii dawladaha hoose iyo tii madaxtooyadu. Labadaa doorasho oo ah wareeggi labaad ee geeddi socodka dimuqraadiyadda isla markaana ay tahay tijaabo lagu qiyaasayo laxaadka iyo xoogga ay leedahay dimuqaraadiyadda somaliland ka hirgashay oo ka bilaabantay sannadkii 2003. Doorashooyinkani waxay adduunka u muujindoonan oo ay kala caddeyn doonaan in doorashooyinkii somaliland ee hore ugu qabsoomay si xor ah oo nabadgelya ah ahaayeen wax ku yimid nasiib iyo inay ahaayeen bisayl iyo qaangaadhnimo ay shacbiga reer Somaliland gaadheen.
Doorashooyinkan soo socda oo bulshada caalamku dedaal badan geliyeen una hayaan dhaqaalihii ugu badnaa ee Somaaliland la geliyo doorashooyinkooda isla markaasna ay xiiso weyn u hayaan ayaa dhinaca kalena noqonaysa qarxiyihii ictiaafka Somaliland. Isla markaa Somaliland waxay taagan tahay isgoys ah inay sii waddo habkii dawladnimo ee beeleysnaa ee madhalayska ahaa iyo hab dawladeed casriya iyo hoggaan adag oo aragti qaran leh taaso ah tan uu u taaganyahay xisbiga UCID.
Dalka Finland waxaanu la kulanay madaxda xisbiga aan isku mabda’a ka nalay dhinaca dawladnimo ku dhisan daryeelka bulshadeeda ee SDP oo hadda aan ka mid ahayn xulafada hogaamisa talada dalka. Xisbiga SDP oo dalka Finland in inta badan talada hayey ayaa imika talada dibada ka jooga. Madaxdu waxay ballan noogu qaadeen in ay arrimaha Somaliland ku dhiirigelindoonaan dawladdooda in ay gacan ka geysato sidii loo ictiraafi lahaa, dhaqaalahana toos loo siin lahaa. Waxaa kaloo ay ballan qaadeen in ay soo diraan goob-joogayaal caalamiya xiliga dooraashooyinka soo socda.
Labada Guddoomiye ee Xisbiga iyo Golaha Wakiilada JSL ayaa dalka Norway kula kulmay saarakiil sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan waxaana ka mid ahaa Ambassadoorka dalka uga qaybgalay Gudiga Caalamiga ah ee arrimaha Soomaalidda ( International Contact Group for Somalia). Waxay labada hogaamiye iyo masuuliintii wehelinaysay saaraakiishaas ku dhiirigeliyeen inay dawladda ka kabaan miisaaniyadda, kaalmada dhaaqalena ay si toos ah u siiyaan Somaliland. Waxay noo sheegeen in Soomaliland adduunku aanuu ula dhaqmin siday muutaystay, oo ay bulshada caalamku xoogga saareen qalalaasaha Soomaaliya ka jira sidi loo afjari lahaa, taasna ay hadda quus ka taagan yihiin lana gaadhay wakhtigii Somaliland bulshada caalamku siin lahaayeen xaaqeeda. Waxaa kale oo ay noo sheegeen in ay u soo diridoonaan goobjoogayaaal caalamiya doorashooyinka soo socda haddi Allah ogolaado, isla markaana waxay ku talo jiraan in ay ka fakarayaan sidi kaalmada ay Somaliland u fidinayaan toos u siin lahaayeen.
Dalka Sweden waxaannu la kulanay saraakiisha khaaska u aha arrimaha Geeska Afrika ugana wakiilka ah dawladda Sweden Guddiga Caalamiga ah ee arrimaha Soomaalida iyo wasiirka hormarinta dimuqradiyadda iyo xuquudda aadamiga iyo weliba xubna ka tirsan baarlamaanka wadamlaas. Dalka Sweden oo lacagta ugu farabadan ku bixiyey shirarkii lagu abuuray madaxnimada Cabdillaahi Yusuf, iyadoo ay ka dambeeyeen galaangal xoog leh oo ay sameeyeen jaaliyadda G/Bari Soomaaliya ee deggan wadanka ayay hadda arrintaasi isbedeshay markii la bedeley maamulkii xisbigii SDP ee la ogaaday wajiga iyo ujeeddooyinka dhabta ah ee Kol. Cabdillaahi Yusuf. Dalka Sweden waxuu muujiyey xiise hor leh oo ay u qaabaan Somaliland iyagoo u ballanqaaday in ay wafdi heer waasiir ah u soo diri doonaan dalka, isla markaana ay labanlaabidoonaan kaalmada ay siiyaan soomaliland.
Socdalkaygii xisbiga UCID waxa ugu xiise weynaa kii aanu ku tagnay dalka Maraykanka, annaga oo ka kooban 7 xubnood oo madaxda xisbiga ah. Waa waftigii ugu cuslaa ee xisbi qaran oo Somaliland sameeyo. Taasi waxay mujiinaysaa in xisbiga UCID oo kali ahi diyaar u yahay in uu Soomaliland badbaadiyo, u shaqeeyo oo ka xoreeyo siyaasadda fashilka ah ee qabyaalada iyo musuqmaasuqu astaanta u noqday.
Waxaanu nasib u yeelanay in aanu la kulanno:
Wasiir ku-xigeenka Arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika Mrs. Jedaye Frazer. Waasiradu waxay aad ugu faraxsanayd socdaalkii ay ku tagtay Soomaliland sanadkan horaantiisii iyada oo u ballanqaaday in ay mar labaad ku dhaadicdoonto Hargeisa. Waxa kale oo ay aad ugu faraxsanayd in ay fursad u heshay in ay indhaheeda ku soo aragto wixii ay hore uga maqli jrtay Somaliland iyo in ay wax fara badan hadda soo ogaatay. Waxay wasiiraddu ballanqaaday in uu gacan mug weyn ka geysandoono Maraykanku kobconta iyo tayeynta hayadaha dimugraadiga ah ee ka hirgalay Somaliland. Waxaanay carrabka ku xejisay addkaynta nabadgelyada, ilaalinta iyo xaqdhawrka xuquuqda aadamiga. Waxay ku nuuxnuuxsatay qiimaha ay Somaliland u leeyihiin doorashooyinka soo socdaa oo ah sallaankii ictiraafka caalamiga ee madaxbannaanida Somaliland. Waxay nagu guubaabisay in wada shaqeynta xisbiyada qaranka iyo laamaha dawladdu ka fiican yihiin yooyootanka iyo is-khilaafka.
Lix maasuul oo ka socda wasaaradda arrimaha dibedda laamaheeda kala duwan oo aannu yeelanay kulan shaqo (Working Sessions). Kulankaas oo socday muddo ka badan laba saacadood, waxayna labada dhinac isweydaarsadeen fikrado badan o ku saabsan Somaliland, doorashooyinka iyo arrimaha Geeska guud ahaan. Kulankaasi wuxuu ahaa kulan qiime weyn leh.
Hayada USAID oo kulankaa ka mid ahaa waxa hogaaminayey ku-xigeenka Maareeyaha Guud. Wuxuu ahaa fadhi ay aad u danaynayeen kuna soo beegmay xilli ay ku talo jireen inay dalka Somaliland si xoog leh ula macaamilaan. Waxay noo sheegeen inay Somaliland u soo diridoonaan, haddi Allah yidhaa, wefti heer sare ah oo ay ku dhaqmidoonaan warbixinta uu keeno.
Saraakiil ka socda wasaaradda gaashaandhiga ayaa noo sheegay in Maraykanku aad u danaynayo Somaliland kana shaqaynayo sidii si dhakhsa ah loo ictiraafi lahaa,
Hayadda hoos timaadda xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka oo Somaliland ka kaalmaysay saddexdii doorasho ee hore haddana goosatay in ay ka wadaan mashruuc socondoona mudda saddex sano ah ayaa noo sheegay in Somaliland kaalinta koowaad kaga jirto hannaanka dimuqraadiyadda ee Geeska Afrika kedib markii ay dhawaan qalalaasaha siyaadeed ka dhaceen Kenya. Waxay inagu booriyeen in aynu kaalintaa adkaysano iyaguna gacan buuxda innagu siinayaan sidii loo adkayn lahaa.
Waftiga UCID ee tegay dalka Kanada oo ka koobnaa lix xubnood oo ka mid ah golaha fulinta ee xisbiga ayaa si xoog leh loogu soo dhaweeyey magaalada Toronto waxayna halkaa kula shireen jaaliyadda Somaliland ee deggan. Waxa intay joogeen qado-sharaf u sameeyey waftiga mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi oo saaxiib weyn u ah Somaliland una ololeeya aqoonsiga Somaliland oo kasoo qaybgalay doorasha kasta oo ka dhacda dalka. Mr. Jim. Intaa kedib, waxay wafigu u dhaafeen xaga caasimadda dalka ee Ottawa iyagoo halkaa kula kulmay:
Afhayeenka baarlaamaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo xubno kale oo badan.
Waxa lagu martiqaaday inay ka qaybgaalaan kal-faadhi uu lahaa baarlamaanku.
Afhayeenka oo qado-sharaf ugu saameyeey baarlaamaank dhexdiisa.
Wasiirka Arrimaha Dibedda oo ay la kulmeen kalana hadleen qadiyadda Somaliland.
Waxaa kalo ay la kulmeen hayada SIDA oo u qabilsan macaawinada dibedda.
Waxay fursad u heleen in ay la kulmaan guddida baarlamaanka ee arrimaha socdaalka.
Dhaaman madaxdaasi waxay muujiyeen sida ay ula diyaarka yihiin inay Somaliland gacan qabtaan kana caawiyaan dhinacyo fara badan sida adkaynta laanta socdaalka Somaliland,
Xisbiga UCID dalalka kale ee reerYurub ee uu gacansaarka la leeyahay waxa ka mid ah: Denmarka, Germany , Holland, UK iyo Begium.
Gunaanadku wuxuu yahay; Adduunku waa u diyaar Somaliland ee madaxda Somaliland diyaar ma yihiin?
Madaxda xisbiga UCID waxay si guud ugu mahadnaqayaan dhammaan dadweynihii sharafta lahaa ee sida qiimiga weyn u soo dhaweeyey waxna ula qabtay intii weftigu ku jiray hawlihiisa. Si gaara waxa aan ugu mahadnaqaynaa madaxda laamaha xisbiga ee ku filiqsan daafaha adduunka ee sida maamuska iyo qadarinta huwan ee hagar la’aanta ah madaxda xisbiga ugu sahlay in ay gutaan hawlahooda. Waxa aan marna la ilaawi karin saaxiibada UCID ee waxtarkooda aan lasoo koobi karin. Waxaannu dhammaan leenahay, waad mahadsan tihiin abaal iyo xusuusna waan idiin haynaa.
This entry was posted in News and tagged ucid. Bookmark the permalink.	Comments are closed.